Facebook Account ဘာကြောင့် lock ကျတာလဲ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Facebook Tutorial > Facebook Account ဘာကြောင့် lock ကျတာလဲ?
Facebook Account ဘာကြောင့် lock ကျတာလဲ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:23 AM Facebook Tutorial
Facebook Account ဘာကြောင့် lock ကျတာလဲ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:23 AM Rating:5အကောင့်အသစ်သမားတွေ နိုင်သလောက် လိုက်နာနိုင်ရင်တော့ ၉၀% Lock ကျခြင်း Block ရခြင်း မှ ကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ အပြည့်စုံ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:23 AM